नयाँ कार किन्ने सपना	Posted in My life by Shekhar on February 20, 2009	कहिले होला पुरा नयाँ कार किन्ने सपना ??
आकार said, on February 20, 2009 at 10:45 am डाइभर बनिहालेछौ !
Reply	साकार said, on February 20, 2009 at 10:59 am शेखर जी ! यो त मामाको घोडा, मेरो ही.. ही.. भने जस्तो भएन र?
Reply	Shekhar said, on February 20, 2009 at 11:40 am त्यस्तै त्यस्तै हो साकार जी ।
Reply	Ametya said, on February 22, 2009 at 10:50 am यो साकार आकार को भाइ हो कि क्या हो ???
Reply	Shekhar said, on February 22, 2009 at 11:23 am हाहा मलाई पनी यस्तै लाग्या थियो । आकार जी लाई सोधेपछि बल्ल थाँहा पाएँ ।
Reply	katuwal said, on February 22, 2009 at 1:17 pm कार चढ्ने सपना देख्नेले अवश्य चढ्छ यार । सपनाहरु विपना बन्न धेरै समय लाग्दैन मात्र मेहनत लाग्छ कि कसो शेखर
Reply	Shekhar said, on February 23, 2009 at 1:32 am हि हि त्यो कार त २९ लाखको थियो, त्यो कारको सपना चाहीँ विपनामा बदलिदैन जस्तो लाग्छ मदन जी ।